Go Go Squid! (2019) - Myanmar Asian TV
Yangzi, Li Xian, Hu YiTian တို႔ပါတဲ့ဇာတ္လမ္းတြဲအသစ္ကေလးပါ
ဂ်ပန္သီခ်င္းေတြကိုCoverျပန္ဆိုေနတဲ့အသက္၁၉နွစ္အရြယ္ ITေက်ာင္းသူေလး ထုံညန္ ဆိုတဲ့ေကာင္မေလးနဲ႔ E-sports gameေတြမွာ legendတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အျပင္
World’s Top Professional gamer တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေကာင္ေလး ဟန္ရွန္းယန္(Gun)
K&K အဖြဲ႕ရဲ႕ leaderတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အျပင္ gamingမွာ Rank 1ရထားတဲ့gamerေလး ဝူပိုင္(DT) , ဝူပိုင္ကေတာ့ ရွန္းယန္နဲ႕ညီအစ္ကိုဝမ္းကြဲ
ဝူပိုင္ (DT)ကေတာ့ ပင္ကိုယ္စရိုက္ကိုကေအးေအးေဆးေဆးေနတတ္တဲ့ေကာင္ေလး
သူကေတာ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို ၁၀နွစ္ေက်ာ္ႀကာတိတ္တခိုးခ်စ္လာခဲ့တာ္
တစ္ညမွာ ရွန္းယန္ကInternet cafeဆိုင္ကိုလာရင္း ရွန္းယန္ကိုျမင္ျမင္ခ်င္း သေဘာက်မိသြားတဲ့ ထံုညန္တစ္ေယာက္ အဲ့ေန႔ကစျပီး ရွန္းယန္ေနာက္ကိုလိုက္ေ
တာ့တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္လည္း ထံုညန္ရဲ႕အရည္အခ်င္းကေတာ့ ျပိဳင္ဘက္ကင္းပါပဲ။ ဇြဲမေလ်ွာ႔ပဲ ရွန္းယန္ နဲ႔နီးကပ္ဖို႔ attentionရဖို႔ စႀကိဳးစားေတာ့တာပါပဲ?❤
ဘယ္ေကာင္မေလးကိုမွစိတ္မဝင္စားတဲ့ ရွန္းယန္တစ္ေယာက္ ဒီေကာင္မေလးကိုေရာ ဘယ္လိုဆက္ဆံမလဲ။
ေနာက္ဆံုးမွာ ရွန္းယန္ရဲ႕ေအးခဲေနတဲ့နွလံုးသားေလးေရာအရည္ေပ်ာ္က်သြားနိုင္မလားဆိုတာ ဒီကားေလးမွာဆက္ႀကည့္ႀကရေအာင္ေနာ္✌✌
Rating မွာလဲ ep-1 နဲ႔တင္ 9.3 ထိရရွိထားတာပါေနာ္?
အပတ္စဥ္ေန႔တိုင္းထုတ္လႊင့္ျပသလ်က္ရွိပါတယ္ရွင့္ MMATV ပရိတ္သတ္မ်ား ဒီဇာတ္လမ္းတြဲေလးကိုလဲေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈ႕အားေပးၾကပါအုံးရွင့္?
အတတ္ႏိုင္ဆုံးတစ္ေန႔တစ္ပိုင္းတင္ႏို္ုင္ေအာင္ translator မ်ားကလဲအတတ္ႏို္ုင္ဆုံးႀကိဳးစားေရးေနၾကပါတယ္ေနာ္?
Review by Minnie Hanna陈爱月
Yangzi, Li Xian, Hu YiTian တို့ပါတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကလေးပါ
ဂျပန်သီချင်းတွေကိုCoverပြန်ဆိုနေတဲ့အသက်၁၉နှစ်အရွယ် ITကျောင်းသူလေး ထုံညန် ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ E-sports gameတွေမှာ legendတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်
World’s Top Professional gamer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကောင်လေး ဟန်ရှန်းယန်(Gun)
K&K အဖွဲ့ရဲ့ leaderတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် gamingမှာ Rank 1ရထားတဲ့gamerလေး ဝူပိုင်(DT) , ဝူပိုင်ကတော့ ရှန်းယန်နဲ့ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲ
ဝူပိုင် (DT)ကတော့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုကအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့ကောင်လေး
သူကတော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ၁၀နှစ်ကျော်ကြာတိတ်တခိုးချစ်လာခဲ့တာ်
တစ်ညမှာ ရှန်းယန်ကInternet cafeဆိုင်ကိုလာရင်း ရှန်းယန်ကိုမြင်မြင်ချင်း သဘောကျမိသွားတဲ့ ထုံညန်တစ်ယောက် အဲ့နေ့ကစပြီး ရှန်းယန်နောက်ကိုလိုက်ေ
တာ့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ထုံညန်ရဲ့အရည်အချင်းကတော့ ပြိုင်ဘက်ကင်းပါပဲ။ ဇွဲမလျှော့ပဲ ရှန်းယန် နဲ့နီးကပ်ဖို့ attentionရဖို့ စကြိုးစားတော့တာပါပဲ?❤
ဘယ်ကောင်မလေးကိုမှစိတ်မဝင်စားတဲ့ ရှန်းယန်တစ်ယောက် ဒီကောင်မလေးကိုရော ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ။
နောက်ဆုံးမှာ ရှန်းယန်ရဲ့အေးခဲနေတဲ့နှလုံးသားလေးရောအရည်ပျော်ကျသွားနိုင်မလားဆိုတာ ဒီကားလေးမှာဆက်ကြည့်ကြရအောင်နော်✌✌
Rating မှာလဲ ep-1 နဲ့တင် 9.3 ထိရရှိထားတာပါနော်?
အပတ်စဉ်နေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိပါတယ်ရှင့် MMATV ပရိတ်သတ်များ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကိုလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှု့အားပေးကြပါအုံးရှင့်?
အတတ်နိုင်ဆုံးတစ်နေ့တစ်ပိုင်းတင်နိုုင်အောင် translator များကလဲအတတ်နိုုင်ဆုံးကြိုးစားရေးနေကြပါတယ်နော်?
Translator : Cheng Ai Zheng & Nway Oo May & Htike Htike & Hnin Moh Moh Lwin
Episode 8 : Openload
Episode9: OpenloadEpisode9: SolidDrive
Episode 10 : OpenloadEpisode 10 : SolidDrive
Episode 11 : OpenloadEpisode 11 : SolidDrive
Episode 12 : OpenloadEpisode 12 : SolidDrive
Episode 13 : OpenloadEpisode 13 : SolidDrive
Episode 14 : OpenloadEpisode 14 : SolidDrive
Episode 15 : OpenloadEpisode 15 : SolidDrive
Episode 16 : OpenloadEpisode 16 : SolidDrive
Episode 17 : OpenloadEpisode 17 : SolidDrive
Episode 18 : OpenloadEpisode 18 : SolidDrive
Episode 19 : OpenloadEpisode 19 : SolidDrive
Episode 20 : OpenloadEpisode 20 : SolidDrive
Episode 21 : OpenloadEpisode 21 : SolidDrive
Episode 22 : OpenloadEpisode 22 : SolidDrive
Episode 23 : OpenloadEpisode 23 : SolidDrive
Episode 24 : OpenloadEpisode 24 : SolidDrive
Episode 25 : OpenloadEpisode 25 : SolidDrive
Episode 26 : OpenloadEpisode 26 : SolidDrive
Episode 27 : OpenloadEpisode 27 : SolidDrive
Episode 28 : OpenloadEpisode 28 : SolidDrive
Episode 29 : OpenloadEpisode 29 : SolidDrive
Episode 30 : OpenloadEpisode 30 : SolidDrive
Episode 31 : OpenloadEpisode 31 : SolidDrive
Episode 32 : OpenloadEpisode 32 : SolidDrive
Episode 33 : OpenloadEpisode 33 : SolidDrive
Episode 34 : OpenloadEpisode 34 : SolidDrive
Episode 35 : SolidDrive
Episode 36 : SolidDrive
Episode 37 : SolidDrive
Episode 38 : SolidDrive
Episode 39 : SolidDrive
Episode 40 : SolidDrive
Episode 41 END : SolidDrive
Studio: Zhejiang TV
Starring: Hu Yitian, Li Mingde, Wen Yifan, Xu Yuexiao, Yu Chengen,